"Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika … sady feno fahasoavana sy fahamarinana… Fa tamin’ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin’ny alalan’i Mosesy ; fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy." Jaona 1:14, 16,17
Nisy vehivavy iray tany Samaria, tonga haka rano teo amin’ny fantsakana teo an-tanàna, ary nahita an’i Jesosy, sasatra, nipetraka teo. Tsy sambatra ity vehivavy ity, nangetaheta ny fony, feno fanontaniana. Nandositra ireo mpiara-belona taminy izy, satria tsy nilamina ny fitondrantenany. Teny vitsy monja no nataon’i Jesosy, dia natoky Azy io vehivavy io. Nasehon’i Jesosy azy koa fa fantany ny fiainany lasa rehetra.
Dia nandao ny sininy ravehivavy ka lasa nandeha. Nitady handositra ny fahazavana nitarafan’i Jesosy ny fiainany ve izy? Tsia, fa lasa nihazakazaka nankany an-tanàna izy, hiantso ireo olona izay nandosirany hatreto, mba ho avy ihany koa: “Andeha hizaha izaroa Lehilahy izaroa, Izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra”.
Nahakasika ny fieritreretany Jesosy, ary nahazo ny fony koa. Tsy nilaza taminy Izy hoe: “Mihataha, fa aza manakaiky ahy, fa izaho no masina fa tsy ianao” (Isaia 65:5). Iza anefa no masina tahaka an’i Jesosy? Ny marina tsy namboamboarina no nolazain’i Jesosy, kanefa nentiny niaraka tamin’izany ny fahasoavana, izay nahazakana io zava-marina io. Tsy nandà ilay vehivavy samaritana mihitsy ny fahasoavan’i Jesosy, fa mainka aza nisintona azy mafy. Tsy nandositra Azy ilay vehivavy, fa lasa niantso ny olona hafa aza. Noreseny lahatra koa izy ireo hanatona an’i Jesosy.
Ankehitriny isika tsirairay dia fantatr’i Jesosy, tahaka ny nahafantarany io vehivavy io. Aoka isika koa hamaly ny fanasany hoe: “Andeha hizaha”. Ary tahaka ireo olona tao an-tanàna dia hiteny koa isika hoe: “Tsy noho ny filazanao ihany no inoanay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao” (Jaona 4:42).